After 37 years, rule of Zimbabwe's Mugabe appears to be over | World News | qctimes.com
Sunshine early then becoming cloudy later in the day. High 37F. Winds WSW at 5 to 10 mph..
Updated: November 22, 2017 @ 1:52 am
Armed soldiers patrol a street in Harare, Zimbabwe, Wednesday, Nov. 15, 2017. Zimbabwe's army said Wednesday it has President Robert Mugabe and his wife in custody and is securing government offices and patrolling the capital's streets following a night of unrest that included a military takeover of the state broadcaster. (AP Photo)
FILE - In this Sept, 1, 2017, file photo, Zimbabwean President Robert Mugabe addresses party supporters at a rally in Gweru, Zimbabwe. Zimbabwe's army said Wednesday, Nov. 15, 2017, it has Mugabe and his wife in custody and is securing government offices and patrolling the capital's streets following a night of unrest that included a military takeover of the state broadcaster. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
Armed soldiers stand by an armored vehicle on the road leading to President Robert Mugabe's office in Harare, Zimbabwe Wednesday, Nov. 15, 2017. Zimbabwe's army said Wednesday it has President Robert Mugabe and his wife in custody and is securing government offices and patrolling the capital's streets following a night of unrest that included a military takeover of the state broadcaster. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
FILE - In this Tuesday, Oct. 3, 2017, file photo, South African President Jacob Zuma, left, walks with Zimbabwean President Robert Mugabe, during their meeting at the Presidential Guesthouse in Pretoria, South Africa, Zuma has called for restraint and calm‚ the unfolding political situation in neighbouring Zimbabwe. (AP Photo/Themba Hadebe, File)
Zimbabwe's army said Wednesday it has President Robert Mugabe and his wife in custody and is securing government offices and patrolling the capital's streets following a night of unrest that included a military takeover of the state broadcaster. (Nov. 15)
An armored military vehicle is parked outside the state-run Zimbabwean Broadcasting Corporation building in Harare Wednesday, Nov. 15, 2017 as soldiers patrol streets. Zimbabwe's army said it has President Robert Mugabe and his wife in custody and is securing government offices and patrolling the capital's streets following a night of unrest that included a military takeover of the state broadcaster. (AP Photo)
FILE - In this Nov. 8, 2017, file photo, Zimbabwe's President Robert Mugabe, left, and his wife Grace Mugabe chant the party's slogan during a solidarity rally in Harare, Zimbabwe. Zimbabwe's army said Wednesday, Nov. 15, 2017, it has Mugabe and his wife in custody and is securing government offices and patrolling the capital's streets following a night of unrest that included a military takeover of the state broadcaster. (AP Photo/File)
Zimbabweans check newspapers as armed soldiers patrol the streets in Harare, Wednesday, Nov. 15, 2017. In an extraordinary statement after taking over the state broadcaster during a night of unrest, Zimbabwe's army said early Wednesday it was only targeting "criminals" around President Robert Mugabe, and sought to reassure the country that "this is not a military takeover." (AP Photo)
Zimbabweans queue outside a bank to withdraw cash as armed soldiers patrol the streets in Harare, Wednesday, Nov. 15, 2017. In an extraordinary statement after taking over the state broadcaster during a night of unrest, Zimbabwe's army said early Wednesday it was only targeting "criminals" around President Robert Mugabe, and sought to reassure the country that "this is not a military takeover." (AP Photo)
FILE - In this Saturday Feb. 27, 2016 file photo, Zimbabwe President Robert Mugabe and his wife Grace attend his birthday celebrations in Masvingo. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
FILE - In this Dec. 17, 2016 file photo, Zimbabwean Deputy President Emmerson Mnanangagwa chants the party slogan at a Zanu PF conference in Masvingo, Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
FILE - In this June, 2, 2017 file photo Zimbabwean President Robert Mugabe, left, and his wife Grace follow proceedings during a youth rally in Marondera Zimbabwe. Zimbabwe's Parliament erupted in cheers Tuesday Nov. 21, 2017 after the speaker announced the resignation of President Robert Mugabe after 37 years in power. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
A street vendor sells fruits on the streets of Harare, Wednesday, Nov. 15, 2017. In an extraordinary statement after taking over the state broadcaster during a night of unrest, Zimbabwe's army said early Wednesday it was only targeting "criminals" around President Robert Mugabe, and sought to reassure the country that "this is not a military takeover." (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
By FARAI MUTSAKA and ANDREW MELDRUM Associated Press